Messages par :
La Banque Malgache de l’Océan Indien (BMOI) et Orange rassemblent tous les avantages de la banque et du mobile.
journal madagascar 0 Commentaire août 30, 2018
Hisy fiantraikany ara-toekarena sy sosialy ny fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina. Mazava fa tsy maintsy hampitombo ny isan’ny mpiasa hiasa ao amin’ny seranana ny fanjakana, indrindra amin’izao fotoana fanamboarana azy izao.
Aretin’ny voa : Fototra voalohany ny diabeta
journal madagascar 0 Commentaire juil 18, 2018
Anisany mahatonga ny fahasimban’ny voa ny tosi-drà miakatra, ny diabeta. Araka ny fanazavan’ny dokotera Fidy Bariniaina dia mitàna anjara asa lehibe amin’ny fanadiovana ny rà ny voa. Video
Manatevin-daharana ny fangatahan’ny solombavambahoaka ho an’ny fanovana ny Antoko Politika Madio (APM).